Modern Art galari Na Europe na ebe Ịchọta Ya | Save A Train
Home > Travel Europe > Modern Art galari Na Europe na ebe Ịchọta Ya
(Emelitere ikpeazụ On: 07/06/2020)
Ndị hụrụ nkà ọgbara ọhụrụ nwere ọtụtụ ebe ileta na Europe. Dị otú ahụ na a akụ na ụba nke oke, ikekwe kasị aka akụkụ na ị na-ahọrọ a ebe. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka nleta Europe praịm hotspots maka nka ngagharị, Gịnị mere atụmatụ gị na njem gburugburu ya? Mụ na ụfọdụ ndị ọma-zubere ụgbọ okporo ígwè agafe, ị pụrụ ileta niile anyị na n'elu họpụta mmadụ nke oge a art veranda na Europe:
Tate Modern Art gallery na London bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu dịkọrọ ndụ n'oge a art veranda na Europe. Ọ bụghị naanị otu onye na ileta na obodo nke obụrede mbụre n'elu 1,000 veranda. Otú ọ dị, na ọ bụ onye na bụ ihe kasị ewu ewu na- njem nleta. Tate Modern ná mmalite nke Tate Gallery nke hiwere na 1897. Oge n'aga, Tate malitere ịgbasa na na 2000 e kewara n'ime anọ dị iche iche veranda. Nke ndị anọ, Tate Modern bụ onye na-kasị nleta, na ya ụlọ karịrị nnọọ sere. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-enweta London ji nkà idaha maka onwe gị, i nwere ike mfe iru obodo ụgbọ okporo ígwè ọtụtụ isi European obodo.
The National Gallery of Modern na Contemporary Art, Rome, Italy
A na-akpọ The National Gallery nke Modern na Contemporary Art na Italian, nkà a gallery na Rome nwere ihe niile ị chọrọ. Na ya na-adịbeghị anya na a ọhụrụ anya, nke mere na nkà nwere ike iguzo ọbụna ihe na ngosi. Nke a gallery bụ ihe pụrụ iche n'ụzọ ya nke ngosi. Ọ na-elekwasị anya ọzọ na themes, agba na ụdị karịa myirịta nke eras na ụzọ. Na-enye ohere ọ bụla esenowo na-enweta nkà na a ọhụrụ, pụrụ iche n'ụzọ, n'ịhụ na nleta ga-echefu echefu. Rome bụ a obodo ukwu ileta ụgbọ okporo ígwè. E nwere ụfọdụ sinik ụzọ gasị can nwere ike ịga n'ụzọ ahụ ọzọ nke Italy.
Switzerland dịkọrọ ndụ na oge a na art idaha na-esetị na ewu ewu, na ọtụtụ veranda na-edebe ya ndụ. Onye na-atụkarị aro ka a nleta bụ Kunsthalle Zurich. Ọ nwere nwa oge ngosi na mgbe na-akpali akpali esenowo. Ndị a ugboro ugboro mgbanwe enyere ndị Kunsthalle reinvent ya njirimara oge ọ bụla. Ị nwere ike iru Zurich ụgbọ okporo ígwè si Munich, Vienna, nakwa dị ka ndị ọzọ na Europe obodo ị gara na gị oge a art ichu nta.
Ọ dịghị njem nke oge a na nkà veranda na Europe bụ ezu na-enweghị na-eleta Paris, France. Otú ọ dị, kama nke Louvre, anyị nwere ike ikwu-aga Pompidou. E nwere ị ga-ahụ na a pụrụ iche ụkpụrụ ụlọ Ọdịdị na ya nile escalators, Ịme Plọmba, na ígwè etiti anya na mputa. Ma ahụmahụ anaghị akwụsị e, dị ka The Pompidou nwere n'elu 50,000 na-arụ ọrụ na ya collection. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị dị ịrịba ama collections nke oge a na dịkọrọ ndụ art nke ruru nnọọ a nleta. Esi na-Paris ụgbọ okporo ígwè si London, Amsterdam, Brussels na obodo ndị ọzọ dị na Europe.
Contemporary art veranda na Europe nwere N'ezie a ịhụ. The akụkụ kasị mma banyere na-eme atụmatụ ihe art na-edebere ndị njem bụ na obodo ndị a niile na-adị mfe ruru ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụrụ na ị dị njikere gaa, AKWỤKWỌ gị Train Tickets ugbu a na-enwe na-agba ịnyịnya!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmodern-art-galleries-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / fr na / nl ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
europetravel London longtrainjourneys Atụmatụ trainjourney Tranride ụgbọ oloko travelswitzerland
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ njem Russia, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel Czech Republic, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Poland, Train Travel Scotland, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe